Las 3 mejores películas de Jack Nicholson › julio 2022
Top 3 Jack Nicholson Movies
Ukusuka kumhlalaphantsi wakhe wegolide phantsi kwengoma yeLakers, uJack Nicholson usabonisa amandla amangalisayo awayesoloko enikezela kubalinganiswa bakhe. Utoliko oluvela kwi-70 esele ikude kunye neyengqondo kude kube ngenkulungwane yama-XNUMX. Umsebenzi ongenakuthelekiswa nanto kwi-stardom yangoku yaseHollywood apho kunzima ukukhetha ifilimu enye okanye enye.
U-Nicholson wayekho kwaye zonke izipili ezigqwethekileyo, i-antiheroes, i-hitrionics, ukugqithisa kunye nokuphambana. Kwaye yonke into iphume ingenamtsalane kwishumi leminyaka emva kweshumi leminyaka. Ukubuya ngokuthembeka ngokungathi akukho nto yenzekileyo kuloo mqolo wokuqala kwiZiko laseLos Angeles Staples Centre. Akufuneki kube lula ukwabelana ngesihlalo nomntu osandul 'ukukukhulula ngokupheleleyo kwi-cinema, okanye ophumeleleyo ngobuchule bakhe obukhethekileyo bokuvelana nento engaqhelekanga, kunye ne-psychopathic, kunye nokwahluka ngokupheleleyo kwi-stereotypes ujongene nezenzo zobubele nezingenakuthelekiswa nanto.
Kodwa kunokuba yimfuneko kakhulu Tom Cruise njengoJack Nicholson. Kuba ngaphandle kweempawu zabanye, abanye bebengayi kuba sengqiqweni. Nangona kunjalo… sibuyela ngokupheleleyo kulo tatomkhulu uthandekayo we-celluloid, sikhetha okona kulungileyo…
Top 3 eCetyisiweyo bhanyabhanya ngu Jack Nicholson
Kwi-apotheosis yomsebenzi wakhe, uJack Nicholson wakhupha eyona nto imbi kakhulu kwi-physiognomy yakhe ukuba ajonge kwezona ziphoso zibi kakhulu zicingelwa ngabantu abaninzi. Stephen King.
Kwabonakala kuza. Loo ndawo incinane yokusabela "kwihotele etofotofo," enamagumbi ayo angamakhulu kunye neepaseji ezingapheliyo zeekhaphethi, ezikumbindi wehlathi elinomkhenkce nempempe yalo eyoyikekayo yemisinga yencam yencam ekhombe kwintlekele. Nangakumbi ngoJack Nicholson osele eze nethale lakhe okoko wasebenzisa imali enkulu ethi "Omnye Wabhabha Phezu kweNdlwane yeCuckoo."
Kwaye nangona isibini esincinci esakhiwe nguJack kunye noWendy sasivakala njengebali leKrisimesi, lo mbandela ukhawuleza ungahambi kakuhle xa ibhloko yokuyila yomyeni kunye nombhali iphelela ekubeni iguquke ibe yiparanoia edibanisa ubunini obungendawo, iimpembelelo ezixelayo kunye nokufikelela okungaphaya kokudutyulwa apho. isethingi idlala ngokugqibeleleyo ukuqulunqa loo claustrophobic kunye ne "labyrinthine" yonke apho uKubrick wayeyonwabele njengehagu kwi-puddle.
Awuphoswa Stephen King kulo manyumnyezi kuba le noveli ibilibali lakhe lesithathu. Kwaye nangona kamva sikwafumana intelekelelo eninzi ekhomba kwezinye iindawo ezibalisayo, eli xesha lokuqala yayiyinto eyoyikisayo sonke esasiyonwabele ngolo hlobo luphambeneyo lokuhamba uhambo oluya ebugeza nasekufeni ukuzama ukuphuma ungonzakele.
Kwaye ewe, le movie nayo ine-BSO yayo ebonakala ngathi iziswe ngqo esihogweni. Phulaphula, mamela:
Kulunge ukuba kungenzeki
Ngamanye amaxesha i-cinema yaseYankee ibonakala izimisele ukukhupha icala eliqaqambileyo layo yonke into. Ngokungathi iphupha laseMelika linokwanda nangaphaya kwawona maphupha amabi kakhulu ekusukeleni intelekelelo enezilogeni ezingenanto. Kule meko, ukugula ngengqondo kwinkalo yayo yemihla ngemihla ayinakuguqulelwa njengento enhle ngaphandle kokuba ngokuchanekileyo, umzamo ongenamsebenzi wokungcwaba izinto zokwenyani.
Ngaphandle kokuba ifilimu idlalwe nguJack Nicholson kwindima yakhe njengengqondo edlulileyo. Kuba uvelwano lwakhe luyinto engaqhelekanga, njengehlumelo elinokugqobhoza enye ipali nangawuphi na umzuzu. Kwaye ke uvelwano luyasimangalisa kwinto engaqhelekanga, kwinkangeleko kaNicholson engathandekiyo kunye nokusabela kwakhe kobushushu kolona tshintsho luncinci kwisicwangciso ingqondo yakhe icinga ukuqhubeka ngokuzola nobomi bakhe phakathi kweendlela zokuphefumla.
Into enomdla kukuba ngaphaya kweentambo ezidityanisiweyo zomlingiswa kaNicholson, apho ukujonga kwakhe okubonakala ngathi kuhamba kuyo yonke into ukuya kwento engafikeleliyo, sinikwa umbono ongalindelekanga wobuntu. Uncumo lwakhe lusenokungabi lolona lucacileyo, kodwa into eyenziwa ngumlinganiswa kaNicholson ekugqibeleni inokunika ubomi bakhe injongo. Nangona ekugqibeleni asikwazanga ukuyonwabela.
Enye ibhabha ngaphezulu kwe-nucus ye-cuco
Esinye sezo zihloko zentsomi ezifanele ukubonwa. Xa umboniso bhanyabhanya okanye incwadi iguga kunye nobungqina bayo obunomsindo nangona kukho utshintsho olucacileyo kwi-sociological paradigm, kungenxa yokuba bakhomba kwizinto ezidlulayo. Kwaye andithethi iingxoxo ezinkulu okanye iingcamango ezintle. Ukugqithisela kunokuba yinto ethatha ingcaciso kwimihla ngemihla. Ngenxa yokuba imibuzo emikhulu ixhalabisa ngaphezu kwazo zonke izinto ezincinci.
Isibhedlele sabagula ngengqondo apho uRandle (uJack) agqibela ekubetheni kwakhe silungelelaniswa njengaloo sapho apho umntu ngamnye akhangele indawo yakhe okanye atyhalelwe kulo ngokungakhathali okanye ukunikezela. Wonke umntu uyaphambana okanye ubhadlile njengoko ejonge kwihlabathi apho yonke into yenzeka phantsi kweendawo eziphambeneyo.
Ngokudanyaza koburharha be-asidi, iminyaka engamashumi asixhenxe kakhulu, iyelenqe lisithatha lisihlise ngeendlela ezahlukeneyo: ukusuka kwinyathelo elikhawulezayo elinama-anti-heroes, i-anti-adventures kunye ne-anti-yonke into ukuya kwi-introspection malunga nesizathu kunye nokuphambana.
Iilebula UJack Nicholson